ဓမ္မဂင်္ဂါ: ဓမ္မဂင်္ဂါပါဠိသင်ခန်းစာ (၁၀)
ကြိယာ(Verb)တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လေ့လာလက်စ ရှိပေမယ့် လာမယ့် သင်ခန်းစာတွေမှာ အခြားကာလ(Tense)အသစ်တွေ မိတ်ဆက်ပေးချင်လို့ ကြိယာအခြေခံပုဒ်တွေအကြောင်း ပြောပြထားချင်တာပါ..။
ပါဠိကြိယာပုဒ်တွေမှာ ဓါတ်(root)၊ ပစ္စည်း (Conjugational sign) ၊ ၀ိဘတ် (Verbal termination)ဆိုတဲ့ အစိတ်အပိုင်းသုံးခုပါတယ်။
ဥပမာ ပစတိ(ချက်၏) ဆိုတဲ့ ကြိယာကို ခွဲခြမ်းလိုက်ရင်
Paca (root) +a (Conjugational sign)+ti (Verbal termination)
ဒါပေမယ့် ခေတ်ပေါ်ပါဠိပညာရှင်တွေက ဓါတ်နဲ့ ပစ္စည်းကို ပေါင်းပြီး ကြိယာအခြေခံပုဒ်(Verbal base) လို့ သင်ပေးကြတော့ ခေါင်းသိပ်မကိုက်တော့ဘူးပေါ့॥။ နောက်ပိုင်းတော်တော်လေး စာဝါးဝလာတဲ့အခါကျရင် ဓါတ်တွေ ပစ္စည်းတွေ အလိုလို နားလည်လာတာကို တွေ့ရမယ်॥။ ခုတော့ သိပ်မမှတ်နဲ့ဦး အဲ မှတ်ပြီးပြီဆိုရင်လည်း မေ့မပစ်နဲ့တော့..။
အပဂစ္ဆ (အဝေးသို့ သွား)
တကယ်တော့ ကြိယာအခြေခံပုဒ်လေးတွေ ရှေ့မှာလည်း သိခဲ့ပါပြီးပြီ..။ အဲဒီကြိယာအခြေခံပုဒ်လေးတွေကိုပဲ ပစ္စုပ္ပန်ကြိယာဖြစ်အောင် ၀ိဘတ်လို့ခေါ်တဲ့ ကြိယာနောက်ဆက်ပုဒ်လေးတွေနဲ့ တွဲပေးလိုက်ပေါ့..။
(နောက်ဆုံး မိနဲ့ မ ရဲ့ ရှေ့မှာ ပစာမိ ပစာမလို့ အသံရှည်လေး ပြောင်းနေတာကို သတိပြုခဲ့ကြဦးပေါ့။)
ပေးထားတဲ့ ကြိယာပုဒ်တွေရဲ့ ကြိယာအခြေခံပုဒ်များကို ရေးပြပါ။
ဥပမာ ၁။ အပဂစ္ဆတိ ရဲ့ ကြိယာအခြေခံပုဒ်က အပဂစ္ဆ ပေါ့
1. အဟံ ဥတိဋ္ဌာမိ။
2. တွံ ၀သသိ။
3. တေ တိဋ္ဌန္တိ။
4. မယံ ဂစ္ဆာမ။
5. တုမှေ သယထ။
6. အဟံ အပဂစ္ဆာမိ။
7. တုမှေ နိသီဒထ။
8. မနုဿာ အာဂစ္ဆန္တိ။
9. ပုရိသော ၀သတိ။
10. သုနခါ သယန္တိ။
12. ငါ ထပြီ။
13. သူတို့ကတော့ အိပ်နေကြဆဲ။
15. ငါတို့ နေကြတယ်။
16. သူတို့ သွားနေကြတယ်။
17. ငါတို့ အဝေးကို သွားကြတယ်။
18. မင်းကတော့ ပြေးနေဆဲ။
19. သူ လာနေတယ်။
20. ငါ သွားတယ်။